BELO - TSIRIBIHINA : Mitohy ny tolon’ny SEMPAMA, mitaky ny fialan’ny Dren Menabe sy ny sefo Cisco Morondava
Mbola miziriziry amin’ny heviny hatrany hatreto ireo mpampianatra manao ny fitakiana, anisan’izany ny any amin’iny Faritra Menabe iny. 11 juillet 2018
Efa ho iray volana mahery izao izy ireo no tsy nanohy ny asany intsony ary nanamafy fa ho- hatevenina izany raha toa ka tsy mahafa-po ny valiny andrasana ankehitriny. Manoloana ny faneriterena ireo mpampianatra hiverina amin’ny asany nanomboka amin’ity herinandro ity dia vao mainka nampirehitra ny hatezeran’izy ireo izany ka tonga hatramin’ny fitakiana ny fialan’ny Dren Menabe sy ny Sefo cisco indray.
Filaharambe namakivaky ny tanàna no nanatanterahana izany, omaly maraina ary nivandravandra tamin’ny sora-baventy ireo fangatahana maro samihafa. Manaporofo ny zava-nitranga fa mbola ho sarotra hahodina ireto mpampianatra ireto raha tsy mahazo izay fitakiana nokatsahiny izay. Milaza moa ireto farany fa tsy hanohy ny fampianarana intsony mihitsy aloha na dia efa manakaiky aza ireo datim-panadinana napetraka.